आज आमाको मुख हेर्ने दिन: सबै आमाहरुमा सुख, शान्ति र सुस्वास्थ्यको कामना « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
आज आमाको मुख हेर्ने दिन: सबै आमाहरुमा सुख, शान्ति र सुस्वास्थ्यको कामना
जन्मदिने आमा र जन्मभूमी स्वर्ग भन्दा प्यारा हुन्छन् । आमाको ममताको मूल्य नै हुँदैन । आमा भनेकै छोरीछोरीको असल र प्रथम शिक्षिका हुन् । हामीलाई जन्म दिनुअगाडि लगभग आफ्नो कोखमा नौ महिना झुन्ड्याएर हिंडडुल, घरको काम, घामछाया, सुख-दु:ख सबै क्षणहरुसँग लडाई गरिसकेकी हुन्छिन् ।
लेखक : एच.बी. ताम्राकार(पत्रकार )
जुन पीडा सुन्नेलाई भन्दा भोग्नेलाई महसुस हुन्छ । हरेक क्षणमा आफ्नै छोरा-छोरीको सफल जन्मकालागि हरेक कुरामा ध्यान दिएर आफु कुरुप भएपनि कुनै वास्ता गर्दिनन् आमा । आमा त ममताकी खानी हुन्। उनी छोरा-छोरीकी जन्मदाता हुन् । यो सुन्दर संसार देखाउन मद्दत गर्ने अभिन्न अंग हुन् । जन्म दिँदा कतिको पीडा हुन्छ त्यो त एक आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ ।
जन्म दिएर बीचबाटोमै छोड्ने आमालाई आमा भनिदैन – उनलाई राक्षस भन्दा हुन्छ । जुन झिनो संख्यामा देखिरहेका हुन्छौं । तर वास्तविक आमा त्यसो गर्दिनन् । उनी आफु बरु मरेर पनि छोराछोरीलाई जोगाउन/बनाउन र संरक्षणतिर लाग्छिन् । यो नै आमाको एक कर्तव्य हो । मायॉ देखाएर हुँदैन । यो त महसुस गर्ने कुरा हो ।
हामी देखिरहेका हुन्छौं, कुनै बेला पनि आमा आफ्नो छोराछोरी भोकै छन् की भनेर खानाको केही अंश नखाइकन राख्छिन् । जन्मपश्चात जसरी छोराछोरी ठुलो हुँदै जान्छन्, हरेक क्षणमा आमा नै साथमा हुन्छिन् । उनी सुरुमा सामान्य लेख्न र पढ्न सिकाउँछिन् । राम्रो भाषाको प्रयोग गर्न सिकाउँछिन् जुन हामीले हाम्रो जन्मको सुरुवाती कालखण्डमै सिक्ने गर्दछौं । राम्रो संस्कार आमाबाटै सिक्छौं । छोराछोरी आँखाका नानी हुन् भनेर पछि नहट्ने ति आमाहरुलाई सदैव सलाम गर्नुपर्छ ।
छोराछोरीको राम्रो भविष्य होस् भन्नकोलागि हरेक उकाली र ओराली धाउँछिन् आमा । खुट्टामा चप्पल हुँदैन, कपाल मिलाउने समय हुँदैन, राम्रोसंग सुत्न निद्रा पुग्दैन, मिठो खाना खान त्यस्तो भोजन हुँदैन । मात्र छोरा-छोरीको उज्वल भविष्यको पिरले पिरोलिरहेकी हुन्छिन् हाम्री आमा । उनका हजारौं सपनाहरु हुन्छन् जुन आफ्नो छोराछोरीबाट पूरा होस् भन्ने अटल चाहना बोकिरहन्छिन् ।
हो , आज हामी उनै आमाको कुरा गरिरहेका छौं । जसले हाम्रो भ्रूणदेखि विवाह हुन्जेलसम्मन ठूलो पीडा सहेकी हुन्छिन् । छोराछोरी अध्ययन गरेर ठूलो मान्छे होस् भन्ने चाहना एउटी आमाको हुन्छ । जहाँ पवित्र र सत्य कुरा बसेर रहेको हुन्छ । हामी बुझ्नु पर्छ आमा र आमाको ममतालाई । उनको त्यो योगदानलाई ।
आमाले भोगेका ति कष्टकर जीवनहरु हाम्रो एक दिनको मुख हेर्ने प्रवृत्तिले सबैकुरा राम्रो हुन्छ भन्नु गलत हो । त्यहि आमालाई पाल्न सक्दैनौं भनेर वृद्ध आश्रममा भर्ना गर्नेहरुको संख्या कम छैन । श्रीमतीलाई भगवान ठानेर, आमालाई पिट्नेहरुको संख्या पनि हाम्रो समाजमा नभएका होइनन् ।
विगतलाई बिर्सेर वर्तमानमा सबै कुरा प्राप्त गरेँ भनेर आमापट्टि पिठ्यू फर्काएर सुख सयलको जिन्दगी बिताउनेहरुको पनि लर्को नै छ हाम्रो समाजमा । यी यस्तै घटनाहरु दोहोरिँदा मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह जन्मिने गर्दछ । हामीले हाम्रो पुस्तामा जे गर्‍यौं त्यो दोहोरिँदै जान्छ भन्ने कुरालाई पनि मनन गर्ने की ?
अन्त्यमा , आजको दिन आमाको मुख हेर्ने दिन हो । विश्वका सबै आमाहरुमा सुख, शान्ति र सुस्वास्थ्यको कामना गरौं । वर्षमा लगभग ३६५ दिनहरुमा १ दिन मात्रै आमालाई पुजा गर्नु सरासर राम्रो काम होइन । सक्छौ भने वर्षमा ३६५ दिन नै खुसी राखौं । आमाको जय होस् । यो संसार देखाउनु भो- उनी सदा अमर छिन् । सदा उनको आशीर्वादले हाम्रो हरेक पाईला सफल रहने छ । जय आमा ! जय ममताकी खानी ।